Creative Writing » အနာဂတ်ရဲ့ ကိုယ်ပွား	13
ရင်ထဲက မေတ္တာတရားက အဆမတန် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီ။ ငါသိတာ တစ်ခုက ငါ့ရင်ထဲမှာ ဒီအချစ်သစ် နဲ့ အတူ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်စဉ်တွေက နံနက်ခင်း ရောင်စဉ်နဲ့ အတူ ငါ့ဘ၀ကို အရောင်တွေ ခြယ်နေပြီ။ ပေပေတေတေနေတတ်ခဲ့တဲ့ ငါ့အတွက် အနာဂတ်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်တတ်လာပြီ။ ဟိုး အရှေ့က ၀ိုးတ၀ါးဝါး မြင်နေရတာ “အနာဂတ်” တဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် “ထောင်ချောက်တစ်ခု” လား?
Mike says: .Congratulation!!!!! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: ကျေးကျေးပါရှင်……….
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိခင်စိတ်ပေါ့လေ။
manawphyulay says: ဟုတ်မယ်ထင်တယ်နော် ဇီဇီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သမီးမိန်းကလေးဆိုရင် ပိုချစ်ရတယ်။ အသည်းတုန် အူတုန်ချစ်ရတာ။ သားကျတော့ မတူဘူး။ သားကျတော့ ၂ နှစ်သားလောက်ဆို ကန်ထုတ်ချင်ပြီ။ သမီးကတော့ ကြီးလေ အချစ်ပိုလေ။
kai says: ငယ်တုန်းနို့များများတိုက်..
ကြားလား.. ကျားလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒါကို မနက် က မြင်တာ နဲ့ အတွေးများ ဆက်နေလို့ပါ။
kai says: ကမ္ဘာ့လူသားတွေအတွက်.. ကုလသမဂ္ဂရယ်…
Alinsett @ Maung Thura says: ငယ်ငယ်တုန်းက… ညာဘက် လက်မမှာ… အပွားအဖြစ်… အလုံးသေးသေးလေးပါလာဖူးတယ်..
တချိန်က… စစ်တိုက်တမ်း ကစားရတာကို ကြိုက်ခဲ့သော ကိုပွါး ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ငယ်ဘဝကို ပြန် သတိရမိ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မနော ကို မိခင်တော်ရမဲ့ သမီးလေး တော့ ကံကောင်းတယ်။ မမြင်ရသေးခင်ကထဲ က ဒီလောက် အင်အားတွေ ရှိနေတာ မြင်ပြီးရင် ပိုပြီး အားတွေ တိုးလာမှာ မပူ နဲ့။
aye.kk says: မေတ္တာ
အောင် မိုးသူ says: မြင့်မိုရ်ထက်မြင့်သောနေရာ မိုးတိမ်များစွာရဲ့အပေါ်မှာ
ဟေသီ says: မိခင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ နည်းတဲ့ အခွင့်ထူးမှ မဟုတ်တာ။ လိမ္မာတဲ့ သားသမီး ရတနာလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် သူကြီးရေ ဘယ်သူ့ကိုမှ.. ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ.. ဖူးမျှော်မာန်ချမရှိခိုးခိုင်းနဲ့…။ ဆိုတဲ့ စကားတော့ သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူးရယ်။ ကျွန်မ အဖေက ခရစ်ယာန်တောင်မှ အဲ့လိုမျိုးသင်မပေးခဲ့ဘူး။ မာန်မာနကို ချိုးနှိမ်ဖို့ပဲ သင်ပေးခဲ့တာ။ အဲ့အယူအဆ တစ်ခုနဲ့ တူတာတော့ သင်ပေးတယ်။ အလွယ်တကူနဲ့ ဘယ်သူကိုမှ ဖူးမျှော်မာန်ချ မရှိခိုးပါနဲ့တဲ့ ဒါလည်း ဗုဒ္ဓဘုရား ဟောခဲ့တာပဲတဲ့။ သူကြီး အတွေးအခေါ်နဲ့ အတော်လေး တူပြီး အလွန်အမင်း အဓိပ္ပါယ် ကွာပါတယ်။ ကျွန်မ အခုထိ အဖေပြောတဲ့ စကားကို နားထောင်တယ်။ ဘယ်တော့မှ အလွယ်တကူနဲ့ ဘယ်သူကိုမှ ဖူးမျှော်မာန်ချ မရှိခိုးပါဘူး သူကြီးရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.